ပိုငျရှငျဆီသို့ – My Blog
“မောငျ ..ယမငျးလမေောငျ့မှေးနမှေ့ာ ဘုရားမှာပနျးလှူပွီးကုသိုလျဒါနပွု ပါတယျမောငျ၊မောငျစိမျးကားပဈခှာ သှားပမေယျ့ယမငျး လမေောငျ့ကို ခဈြနဆေဲပါမောငျ၊မောငျတဈယောကျအသကျရှညျလို့ဘုနျးကွီးပါစေ၊ သှားလရောခုလုတျမထိစူးမငွိပါစေ နဲ့မောငျ ရယျ” ဘုရားမှာမောငျ့အတှကျရညျစူးပွီး စပါယျပနျးတှကေပျလှူးရငျးဆု တောငျးကာဦးခကြနျတော့ပွီးဘုရား ရငျပွငျပျေါကနေ ယမငျးတဈ ယောကျဆငျးလာခဲ့တော့တယျ။ ဘုရားပျေါတကျလာတဲ့ဦးအောငျ မောငျးတဈယောကျယမငျးကို မွငျပွီးပွုံးပွီး ကွညျ့နလေိုကျကာ သားအတှကျဘုရားပနျးနှငျ့ဆှမျးကပျ လှူလိုကျတယျ “မိုကျလိုကျတဲ့သား၊မငျးအတှကျ ကလေးမလေးက ဘုရားမှာလာဆု တောငျးနတေယျသား” မိနျးကလေးအတှကျစိတျမကောငျး ဖွဈကာသားကိုစိတျထဲကဒေါသ ထှကျမိတယျ။ဦး အောငျမောငျးဟာ ဒီရှာသား၊ဒီရှာရဲ့သူကွီး ၊အားလုံး ကလေးစားရတဲ့လူ၊အခုတော့သား လုပျရပျကွောငျ့ဦးအောငျမောငျး ယမငျး နှငျ့သူမမိခငျကိုမကျြနှာ ပူနမေိတယျ။
ဦးအောငျမောငျးဟာ ညီဖွဈသူအစာဆိပျဖွဈပွီးမကျြစိ ရှမှေ့ာသဆေုံးခဲ့တာကိုမွငျခဲ့ရတဲ့အ တှကျ သားဖွဈသူကိုဆရာဝနျဖွဈရ မယျဆိုတဲ့ရညျရှယျခကျြတှနေဲ့မလှိုငျ မှာသားကိုကြောငျးအိပျကြောငျးစား ထားကာပညာသငျ စခေဲ့လူ၊မိမိရှာကို တိုကျနယျအဆငျ့အထိဖွဈအောငျ ကွိုးစားပွီးဆေးရုံတဈရုံရဖို့ကွိုး စားနတေဲ့လူ၊ရှာသားတိုငျးကဦး အောငျ မောငျးရဲ့စတေနာကိုနား လညျတော့လေးစားကွရတယျ။မိမိ ငှကေိုအကုနျခံပွီးအစိုးရဆီမှာဆေး ရုံရဖို့ကွိုးစားခဲ့တော့အစိုးရရဲ့ စေ တနာနဲ့ဆယျ့ခွောကျကုတငျဆနျ့ ဆေးရုံလေးတဈရုံကိုတညျဆောကျ ပွီးဖွဈပမေယျ့ဆရာဝနျကတော့မရှိသေးပါဘူး၊ဆေး ကြောငျးပွီးလာတဲ့ သားကိုရှာကိုပွနျလာခိုငျးပမေယျ့ သားလေးခနျ့ထကျကြျောကအမွဲနမေယျမပွောတဲ့အခါ၊အလညျတဈ ခေါကျ တော့လာဖို့ချေါတာကွောငျ့ သားဖွဈသူရှာကိုလာခဲ့တယျ။အဲဒီအခြိနျမှာပဲယမငျးတဈယောကျ လှညျးပျေါကအဆငျးခွခေေါကျလဲ တာကွောငျ့လမျးမလြောကျနိုငျတဲ့ အခါမှာ “အား ကြှတျ ကြှတျ ကြှတျ” “ဟယေ့မငျး နငျ့ခွထေောကျက အရမျးရောငျနတေယျ” “အေးဟယျတငျတငျရယျ၊ဆေးခနျး ပွ ဖို့ကလဲမွို့ကအဝေးကွီး၊ဘယျလိုလုပျရမလဲမသိတော့ပါဘူးဟယျ”
“နဦေးယမငျး၊ဘကွီးအောငျမောငျး သားရှာရောကျနတေယျဟဲ့၊အဲဒါ ငါသှားချေါလိုကျမယျ” “ဘာကွောငျ့ဘကွီးဦးအောငျမငျး သားကိုချေါရမှာလဲတငျတငျရဲ့” “သူကဆရာဝနျလေ” “ဟုတျလားတငျတငျ ဘကွီးအောငျမောငျးမှာသား တဈယောကျရှိတယျ ဆိုတော့ယမငျးသိပါတယျ၊ဒါပမေယျ့ဆရာဝနျဖွဈ မှနျးတော့မသိခဲ့ပါ။ယမငျးတို့အဖေ တပျမှာတိုကျပှဲကတြော့အမကေသူ မှေး ဖှားခဲ့ရာဒီရှာလေးမှာပွနျုပီးအ ခွခေခြဲ့တာမို့ဒီရှာလေးကိုရောကျရှိ ရခွငျးဖွဈတယျ။ရှာသူဆိုပမေယျ့ ယမငျးဟာအလှပဂေးတဈ ယောကျ ပါပဲ။လုံးကွီးပေါကျလှပေါ့။ခုခတျေ စကားအရအကိတျပါ။သေးတဲ့မ လြျောညီစှာတငျသားလုံးလုံးကွီး တှနေဲ့အိုးကားပါ တယျ။ရငျသားက တော့အရမျးမကွီးပါဘူး။ရှာကကာ လသားတှကွေိုကျကပြမေယျ့အနေ တညျတဲ့ယမငျးကိုမစရဲကွဘူး။မု ဆိုး မသမီးပမေယျ့ဗိုငျးကောငျးကြောကျဖိနတေဲ့ယမငျးရဲဂုဏျသတငျး ဟာအစှနျးအထငျးမဲ့ပွီးလေးစားရတဲ့အနအေထားပါပဲ။ “ယမငျး ရေ “ “လာလတေငျတငျ” တငျတငျနဲ့အတူအမြိုးသားတဈ ယောကျပါလာတယျ။ထိုအမြိုးသား ကိုမွငျလိုကျတာနဲ့ယမငျးရငျထဲနှေး ထှေးတဲ့ခံစားမှု့တခုကိုရရှိလိုကျရ တဲ့ယမငျးပါးပွငျမှာရှကျသှေးရယျ ဖွာထှကျမိတော့တယျ။တဈခါမှမဖွဈပျေါခဲ့ဖူးတဲ့ခဈြ စိတျဟာခုမှမွငျဖူး တဲ့လူတဈယောကျအပျေါယိုဖိတျစီး ဆငျးခဲ့ရတယျ။
“ယမငျးရေ၊ဒီမှာဆရာလေး ခနျ့ထကျကြျောပါလာပွီ” “ဟုတျ ဟုတျကဲ့ကွှပါရှငျ” “ခွထေောကျနာနလေို့ဆို” “ဟုတျ ဟုတျကဲ့ရှငျ့” “ကနြျော ခဏ ကိုငျကွညျ့မယျနှျော” “အိုး အားနာစရာ” “ဘာမှအားမနာနဲ့ကနြျောဆရာဝနျ ပါ” “ဟုတျကဲ့ရှငျ့” ဆရာလေးက ယမငျးရဲ့ခွထေောကျ ကိုအသအေခြာကိုငျတှယျစမျးသပျ ပွီးနောကျတော့ “သိပျတော့စိုးရိမျစရာမရှိပါဘူး။ ခွခေေါကျလဲပွီး အကွောတှေ ယောငျရမျးနတော၊ဆေးလိမျးဆေး သောကျလုပျရငျပြောကျပါတယျ။ ကနြျောဆေးလိမျးပွီးဆေးတှပေေး ခဲ့ပါ့မယျ” ယမငျးမှာတော့ဆရာလေးရဲ့ကိုငျ တှယျစမျးသတျမှု့မှာရငျခုနျသံတှေ မွနျလာတော့ဆရာလေးမသိအောငျ ဟနျဆောငျကာနရေ တော့တယျ။ ခွထေောကျကိုဆေးလိမျးပွီးပတျ တီးစညျးနှောငျပေးကာလကျဆေး ပွီးသောကျဆေးတှပေေးပါတယျ။
“ကဲကနြျောပွနျတော့မယျ” “ဆရာရယျခွကွှေခလေးယူသှား ပါရှငျ့” “နပေါစဗြော၊တဈရှာတညျးသား ခငျြးတှမေယူပါရစနေဲ့” “ကြေးဇူးတငျလို့ပါဆရာရယျ၊ဆရာ့ ကိုမွို့မပွနျခငျထမငျးတဈနပျတော့ ဖိတျကြှေးခှငျ့ပွုပါရှငျ” “ခွထေောကျသကျသာသှားရငျ ကြှေးပါဗြာ” “ဟုတျကဲ့ဆရာလေး” ဆရာလေးအိမျပျေါကဆငျးသှား တော့ဆရာလေးကြောပွငျကိုငေး မောကွညျ့ကွညျ့ပွီးကနျြ ခဲ့ရတဲ့ယ မငျးမှာဝဒေနာတဈခုခံစားရပွနျ တယျ။ဒီလိုနဲ့သုံးရကျလောကျမှာယ မငျးခွထေောကျသကျသာလာတယျ။ “ယမငျး ခွထေောကျသကျသာ ပွီမဟုတျလား” “အေးတငျတငျ” “သကျသာရငျရှာမှာလုပျအားပေး ဖို့ချေါမလို့” “ဟငျ ဘာလုပျအားပေးရ မှာလဲ” “နငျ့ဆရာလေးလေ ခုရှာကလူတှေ ကိုဘကွီးအောငျမောငျးအိမျကနပွေီးဆေးကုပေးနတော၊လူလိုတယျ” “နငျသှားပွီး လုပျအားပေးလိုကျလေ” “ငါလဲလုပျပေးနတော၊နီးနားပတျ ဝနျးကငျြကလူတှပေါရောကျလာလို့ မနိုငျဘူး၊အခုဆေးရုံကိုရှပွေီ့းကု သပေးနရေတယျ၊အဲဒါနငျ့လာချေါတာ” “အေးပါဟယျ၊ငါကူညီပါ့မယျ” ယမငျးနှငျ့တငျတငျမှာဆေးရုံကိုသှားပွီးအကူအညီသှားပေး ကွရတယျ။
ဘကွီးဦးအောငျမောငျးတဈယောကျ မကျြနှာမှာအပြျောတှနေဲ့မွငျရတော့ ယမငျးစိတျခမျြးသာမိတယျ။ “ဟာ ယမငျးလိုကျလာ တယျ” “ဟုတျတယျဆရာ၊လူလိုတယျဆိုလို့” “ခွထေောကျသကျသာသှားပွီလား” “သကျသာသှားပွီဆရာ” “ဟုတျကဲ့ကြေးဇူးပါ ဗြာ” ဆရာဝနျလေးဟာလူနာတှတေဈ ယောကျပွီးတဈယောကျစမျးသတျ ကုသပေးနတေယျ။ယမငျးတို့က တော့လူနာကို အလှညျ့ကခြျေါပေး တယျ။ဆရာဝနျလေးပွောတဲ့ဆေး တှကေိုပေးတယျ။နလေ့ညျကတြော့ ခနနားကွတယျ။ဦးအောငျမောငျး အိမျ ကစားစရာတှလောပေးတော့ စားသောကျကွရငျး “ယမငျးတို့လာကူညီတော့အားရှိ တယျဗြာ။အဖကေသူ့ရှာကိုရောကျ တော့ နာတှဆေေးကုပေးခဲ့ပါဆို လို့ကနြျောကုနရေတာ” “ကုသိုလျရပါတယျဆရာ” “ကုသိုလျရတာတော့မှနျပါတယျ၊အဖကေရှာမှာနေ စခေငျြတယျ၊ဒါပေ မယျ့ကနြျောကရှာမှာနရေတာအ ဆငျမပွဘေူးဗြာ။ကနြျောကအထူးကုဖွဈခငျြတော့ရနျကုနျမှာပဲအဆငျပွေ တယျ” “ဟုတျတာပေါ့ဆရာရယျ၊အခုလိုမြိုး ကမြတို့ရှာမှာဆရာ့လိုစတေနာမတ်ေတာနှငျ့ကုသပေးမယျ့ဆရာဝနျတဈ ယောကျ လိုအပျနတော” “သိပါတယျ ယမငျးရယျ” “ဆရာရှာမှာမပြျောတာမွို့မှာရှိတဲ့ ခဈြသူကိုမြားလှမျးနလေို့လား”
“မဟုတျရပါဘူးဗြာ၊ ကနြျောမှာလှမျးရမယျ့သူမရှိသေးပါဘူး” ယမငျးမေးခငျြနတေဲ့မေးခှနျးကိုသိလိုကျရပွီဖွဈတဲ့အတှကျဝမျးသာမိ တယျ။ဘာကွောငျ့ မှနျးမသိပါဘူး၊ဆရာလေးအနားနရေတာယမငျးအရမျးပြျောနမေိတယျ။ဆရာလေးမကျြနှာ ကိုလညျးခနခနငေးမောကွညျ့မိတယျ။ “အျောဆရာရယျ မပွနျပါနဲ့လား၊ယမငျးဆရာပွနျသှား ရငျလှမျးနရေတော့မှာ” ရငျထဲကနပွေီးတှေးနမေိတယျ။ဆ ရာလေးကို ယမငျးခဈြမိနပွေီလေ။ “ယမငျးမနကျဖွနျဥပုတျနလေ့ေ၊နငျ ဘုရားသှားဦးမလား” “အေးလသှေားမှာပေါ့” “မယမငျးကဥပုတျနေ့ တိုငျးဘုရား သှားတာလား” “ဟုတျတယျဆရာ” “ဘယျသူ့အတှကျမြားဆုတောငျး ပေးနတောလဲ” “ဆုတောငျးတာတော့မဟုတျ ဘူး ဆရာ၊ဥပုတျနတေို့ငျးဘုရားရငျပွငျ ကိုသနျ့ရှငျးရေးလုပျတယျ၊ပနျးဆီမီး ကပျတာပါ” “အျော ဟုတျလား” ဒီလိုနဲ့ဆေးခနျးမှာ ဆယျရကျခနျ့ဆေး ခနျးထိုငျပေးပွီးနောကျမှာယမငျးနဲ့ ဆရာလေးတို့တျောတျောရငျးနီးလာ ကွပွီးဆရာလေးဟာယမငျးထကျ တ နှဈလောကျငယျမှနျးသိလာတယျ။
တငျတငျကယမငျးနဲ့ဆရာလေးစ ကားပွောနရေငျမသိမသာနဲ့ရှောငျထှကျပေးတတျတယျ။တနတေ့ော့ “ယမငျးကနြျောပွနျရတော့ မယျဗြ” “ရှငျ ဘာလို့လဲဆရာ” “ကနြျောရနျကုနျကအထူးကုဆေးရုံ ကွီးတဈခုမှာအလုပျလြောကျထားတာရပွီ” “အျော ..ဆရာ ရယျ” ရငျထဲဆှေးမွသှေ့ားရတဲ့သူက ယမငျးသူဇာရယျပါ၊ “ဆရာကတော့ပြျောနမှောပေါ့နှျော” “ယမငျးရယျ ပြျောရာမှာမနရေ တျော ရာမှာနရေမယျမဟုတျလား၊ကနြျော ဆရာဝနျကွီးတှဆေီကပညာတှေ ထပျသငျရအုံးမယျလေ” “ဟုတျကဲ့ပါဆရာ” “ယမငျးကနြျောစကားတဈခုပွော ခငျြလို့” “ပွောပါဆရာ၊ယမငျးနားထောငျ နပေါတယျ” “ယမငျးကနြေျာ့ကိုစိတျမဆိုးပါနဲ့နှျော” “ဆရာရယျယမငျးဆရာ့ကိုဘာလို့ စိတျဆိုးရမှာလဲ” “ကနြျောပွောမယျ့စကားကိုသခြော နားထောငျပေးပါယမငျး” “ဟုတျကဲ့ ဆရာ” “ကနြျောယမငျးကိုခဈြနတေယျဗြာ” “ရှငျ” ယမငျးအံ့ဩသငျ့သှားတယျ။
မညျသို့ အခါကမှခဈြဟနျမပွခဲ့တဲ့ဆရာက အခု ကမြှယမငျးကိုခဈြတယျတဲ့လား အရမျးလဲဝမျးသာမိတယျ။ “ယမငျးစိတျဆိုးသှားပွီလား” “မဆိုးပါဘူးဆရာ” “ဒီလိုဆိုယမငျးရဲ့ သဘောထားကို ပွောပါဦး” “ဆရာရယျ မိနျးကလေးတဈယောကျအနနေဲ့ အခုခဈြရေးဆို၊အခုအဖွပေေးရ တာတော့မဖွဈနိုငျ ဘူး၊ဒါပမေယျ့ ယမငျးကဆရာ့ကိုအရငျခဈြခဲ့တာပါ” “ဗြာ..တကယျနှျောကနြျောအရမျး ဝမျးသာမိတယျဗြာ” “ယမငျး” “ရှငျ ဆရာ” “ဟာဗြာ အခုထိဆရာပဲလားဗြာ” “ယမငျးကလဲအချေါတဈခုခုတော့ ပွောငျးသငျ့တယျ” “ဟုတျကဲ့ပါမောငျ” “ဟာ ခဈြ လိုကျတာယမငျးရယျ” မောငျကယမငျးကိုဖကျပွီးကမြပါး ပွငျကိုနမျးလိုကျတော့ယမငျးရငျထဲ ဗလောငျဆူသှားတော့တယျ။မိမိ ခဈြရတဲ့သူတဈယောကျကမိမိကိုဖကျုပွီးနမျးရှိုကျတဲ့အခါမှာအဖိုနဲ့ထိတှေ့ မှု့မရှိတဲ့ယမငျးမှာရငျထဲတသိမျ့သိမျ့ တုနျသှားရတာ ပေါ့။မောငျ့အနနေဲ့ ကတော့ထူးခွားမယျမထငျပါ။လူ နာအမြိုးသမီးမြားကိုသူကအကွိမျ ကွိမျထိတှဖေူ့းသူလေ။ပွီးတော့ မမွငျဝံ့ ဆေးသမားချေါတာကိုး ယမငျးမှာဖွငျ့ပိပိထဲကတောငျစိုခငျြ သလိုဖွဈသှားရတယျ။
“ယမငျး မနကျဥပုတျနဘေု့ရားသှား ဦးမှာလား” “သှားရမှာပေါ့မောငျ” “မောငျလဲလိုကျခဲ့မယျယမငျး” “လိုကျခဲ့လမေောငျ” ဘုရားကိုမောငျနဲ့အတူသှားလိုကျ ကွတယျ။ပွီးတော့ဆေးခနျးကိုသှား တော့ဥပုတျနမေို့ဘယျသူမှဆေးခနျး ကိုမလာကွပါဘူး။ မောငျနှငျ့ယမငျး နှဈယောကျတညျးသာရှိတယျ။တငျ တငျကလညျးလူပါးတဲ့ရကျမို့မလာ ဘူးပွောသှားပွီးသူ့အဖနှေငျ့အမေ ဥပုတျ စောငျ့မှာမို့ဆှမျးခကျြပို့ရမှာ လို့ပွောသှားတာကွောငျ့ဆေးရုံမှာ မောငျနှငျ့ယမငျးသာရှိတယျ။နှဈ ယောကျတညျးရှိတယျဆိုတဲ့အသိ က ယမငျးရငျထဲတမြိုးဖွဈမိတယျ။ဒီ ကွားထဲမောငျကယမငျးကိုဖကျပွီး “ယမငျး မောငျအရမျးခဈြတယျ” “အို! မောငျလှတျကှာ၊ ယမငျးမော လှပွီ” “မလှတျဘူးကှာ၊ဒီနမှေ့မောငျတို့ လှတျလှတျလပျလပျတှရေ့တာ” “မောငျကလဲအဆိုးနဲ့ကှာ” “ခဈြလို့ပါယမငျး ရယျ” မောငျကယမငျးကိုဖကျပွီးယမငျး နှုတျခမျးကိုလာနမျးစုပျတယျ။ယမငျး ရငျထဲတမြိုးကွီးခံစားရတယျရှငျ။ တလှိုကျလှိုကျ တကျလာတဲ့ရငျခုနျ မှု့နဲ့အတူပိပိအတှငျးသားတှစေိုလာ တယျ။ဘာကွောငျ့မှနျးရယျမသိဘူး မောငျ့အနမျးကိုယမငျးပွနျတုနျ့ပွနျ မိ တယျ။နောကျတော့မောငျကဆေးခနျးရဲ့တံခါးကိုပိတျလိုကျတယျ
“မောငျ ဘာလို့ပိတျတာလဲကှယျ” “တခွားလူတှမွေငျမှာစိုးလို့ပါ” “အာမောငျကလဲလူတှလောရငျဘယျလိုလုပျမှာလဲ” “ဒီနမေ့လာပါဘူးယမငျးရယျ” ပွောရငျးနဲ့ယမငျးကိုပှခြေီ့ကာ ဆေးခနျးကလူ နာစမျးသပျတဲ့ကုတငျပျေါတငျလိုကျကာအကငြ်္ီကွယျသီး မြားကိုဖွုတျပွီးဘျောလီခြိတျကို ဖွုတျတယျ “မောငျ ယမငျးကွောကျ တယျ” “မကွောကျပါနဲ့ယမငျးရယျ” တစထကျတစအတငျ့ရဲလာတဲ့မောငျ ကွောငျ့ယမငျးမှာအသကျရှူတာ မမှနျခငျြတော့ပါဘူး။ ပကျလကျက လေးဖွဈနတေဲ့ယမငျးပေါငျကွားကို မောငျ့ရဲ့လကျကရောကျလာတယျ။ ယမငျးတားဆီးနပေမေယျ့အားအငျ တှေ ကုနျခမျးသလိုဖွဈနရေတယျ။ ပိပိကိုအပျေါကနအေုပျကိုငျပွီးပှတျပေးနတေော့ယမငျးဘယျစိတျထိနျး ထားသျောလညျးပိပိကတော့ မထိနျး ပါ။သူ့အလုပျကိုသူလုပျပွီးအရညျ မြားကအတှငျးခံဘောငျးဘီအထိစိုရှဲလာသညျ။မောငျကအတှငျးခံ ဘောငျးဘီကိုဆှဲခြှတျ တော့ယမငျး မှာမကျြနှာပူပွီးမကျြနှာကိုလကျဝါး နှငျ့အုပျလိုကျမိတဲ့ခနမှာမောငျက ယမငျးရဲ့ဆီးခုံကွီးပျေါကိုမကျြနှာ အပျပွီးနမျး ရှိုကျလတေော့ “ဟာ မောငျမလုပျရဘူးလေ၊ဘုနျးကံ တှနေိမျ့ကုနျပါ့မယျ” စိုးရိမျတကွီးတားမွဈလိုကျပမေယျ့ မောငျကယမငျးရဲ့ပိ ပိကိုလြှာပွား ကွီးနဲ့အပွားလိုကျယကျခလြိုကျ တယျ။
“အိုး !မောငျမလုပျရဘူးလကှေယျ” မညျသို့ပငျတားဆီးစကောမူမောငျ့ လြှာဖြားကယမငျးရဲ့အဖုတျအကှဲ ကွောငျးထဲတိုးခြဲ့၍ဝငျ လာသညျ။ “အာ့ ! အငျးးဟငျးးးဟငျးးး” “အား မောငျ မလုပျနဲ့ကှာ၊အား ကြှတျ ကြှတျ” မကျြလုံးကိုစုံမှိတျပွီးအျောလိုကျ သညျ။ ကွကျသီးထပွီးခါးပါကော့ သှားရတယျ။ပထမဆုံးပိပိယကျခံရတဲ့ဝဒေနာကိုခံစားလိုကျရပွနျသညျတားမွဈနပေမေယျ့လုပျခငျြရာ လုပျလုပျနသေောမောငျ့ကိုစိတျမဆိုးမိပဲအားနာလှ သညျ။ဘုနျးနိမျ့မှာလဲစိုးရိမျသှားပွီး အတငျးပငျကိုမောငျ့လကျကိုဆှဲယူ လိုကျ ရာမောငျကအလိုကျသငျ့ပါပွီးယမငျးရဲ့အပျေါတကျလာကာ ယမငျးပေါငျနှဈဘကျကိုကားပွီး ဒူးထောကျလိုကျသညျ။ထိုနောကျ့ ယမငျးပိပိအဝကိုတပွေီ့းအသာဖိ ထညျ့တော့ “ဗဈြ ဗဈြဗွိ” “အာ့! မောငျနာတယျ” အလိုးခံရပွီဆိုတဲ့အသိကရငျထဲ လှိုကျကနဲ ဝငျလာပွီးအပြိုရညျပကျြ ပွီဆိုပွီးစိတျထဲခံစားရပွီးဗိုကျကွီး မှာလဲစိုးရိမျသှားရသညျ။သို့သျော ဗိုကျမကွီးစရေနျဆေးခနျးတှငျး အသငျ့ရှိနသေောတားဆေးအား သောကျလြှငျရသညျ့အတှကျစိုးရိမျစိတျကလြော့ပါးစသေညျ။ထို့အတူ သိပျခဈြရတဲ့မောငျ့ အတှကျယမငျး ရဲ့အပြိုစငျဘဝကိုပေးဆပျရတာလဲကနြေပျပါတယျ” မောငျကယမငျးရဲ့နှုတျခမျးကိုစုပျ နမျးပွနျတယျ။စိတျထဲ ဘယျလိုဖွဈရသညျကိုနားမလညျနိုငျပေ။ စိုးရိမျစိတျတို့လြော့ပါးလာပွီးကာမ စိတျတို့ပွနျသကျရောကျလာကာ ပွနျပွီးစုပျနမျးမိ တော့တယျ။နာကငျြခွငျးဝဒေနာကပိပိထဲမသကျရောကျတော့ပဲစိတျလှုပျရှားမှု့နဲ့အတူပိပိအ တှငျးသားကစုပျယူသလိုလှုပျရှား လာ တော့ယမငျးလဲအံ့ဩမိတယျ။
မောငျကတော့စုပျနမျးပွီးနောကျ မှာဆတျကနဲ့လှုပျရှားပွီးဖိသှငျး လိုကျတယျ “ဗဈြ ဗဈြ ဖောကျ ဗြိ” “အာ့! အိုး အငျးဟငျးးဟငျး” တိုးဝငျလာတဲ့လီးကွောငျ့အပြိုမှေး ဖောကျသှားတာကိုသိလိုကျပွီးယ မငျးမှာစပျဖငျြးဖငျြးဝဒေနာကိုခံစား လိုကျရသလို ထူးဆနျး တဲ့အရသာ တမြိုးကိုပါပူးတှဲသိလိုကျရတယျ။ ဆကျပွီးလိုးမှာကိုလဲကွောကျနတေယျ။မောငျကတော့ဆကျပွီးမလှုပျ ရှားပဲလီးကို အဆုံးထိသှငျးထားပွီး ယမငျးနှုတျခမျးကိုစုပျနမျးနပွေနျ တယျ။မောငျ့ကွောငျ့နာကငျြခွငျးဝဒေနာကိုကနြေပျစှာခံယူမိပွီးမောငျတ ဈယောကျအဆငျပွစေဖေို့သာတှေးမိတော့တယျ။ တငျးကပျြကပျြတဈဆို့ဆို့ဝဒေနာနှငျ့အတူပိပိအတှငျးသားလှုပျရှား လာပွီးအရညျ တှပေိုထှကျသလိုခံ စားရလာတယျ။တကယျတမျးတော့ ယမငျးလဲခံနိုငျပါပွီသို့သျောမောငျကဆကျမလှုပျရှားပဲယမငျးရဲ့နို့တှကေိုပါ ပှတျသပျပေးတဲ့အခါအလိုလို ညညျးမိတယျ။ညညျးသံထှကျမှ မောငျကလီးကိုတဖွေးဖွေးနှငျ့နှုတျ ယူပွီးဖွေးဖွေးခငျြးအသှငျးအ ထုတျ လုပျတော့တယျ။အစကေို့လဲထိသလိုအတှငျးနှုတျခမျးသားမြားကိုပှတျ ဆှဲသှားတဲ့မောငျ့လီးကွောငျ့ပိပိကအရသာတမြိုးကို ပါခံစားလိုကျရ သညျ။
“ဖှတျ!ဖတျ..ဖတျ..ဖတျ” ဆီးခုံခငျြးတဖတျဖတျရိုကျမိနသေလို လီးကတဇှိ ဇှိ တဗြိဗြိ ဝငျနတေော့ မကျြလုံးကိုစုံမှိတျပွီးညညျးမိ တော့ တယျ။နညျးနညျးမွနျလအေရသာ တှလေ့ပေိုညညျးမိတော့တယျ။ “ဗဈြ! ဘှတျ !ဖတျ! ဖတျ ဖနျးဖနျးးး” “အငျ့! အိုးးအငျးးဟ ငျးးဟငျးး” ဘယျလိုသဘောကွောငျ့ရယျယမငျးမသိတော့မောငျ့ခါးကိုသာအတငျး ဖကျထားပွီး နခေငျြတော့တယျ။ ခါးကိုလှမျး ဖကျတော့လိုးတဲ့အရှိနျ နှေးခြိနျမှာတော့ယမငျးအား မရတော့ပေ။ခါးကိုလှတျလိုကျပွီး မွနျမွနျဆောငျ့စဖေို့သာခါးကိုလှမျးဆှဲပွနျ တှနျးတဲ့အမှု့ကိုမသိစိတျထဲကလုပျပေးနမေိပွီးမောငျမွနျလာ သညျနှငျ့အမြှ “ဖှတျ ဖတျ ဗြိ ..ဗဈြဖနျးးးဖနျးဖနျး” “အာ့!ရှီးးရှီးးး အိုးး အားအငျးဟငျးး” ကွားဖူးနသေောကာမအမှု့ပွီးတယျ ဆိုတာကိုသတိရလိုကျပွီးအထှဋျအထိပျသို့ရောကျနပွေီဆိုတာသိလိုကျ ရ တော့တယျ။
“ဘှတျ ဖှတျ ဖှတျ ဖနျး ဖနျးးဖနျး” “အားရှီးးရှီးးအိုးးး” ပိပိအတှငျးလှုပျရှားမှု့မြားနှငျ့အတူ ယမငျးမှာအရညျတှစေီးဆငျးသှားသလို ခံစားလိုကျတယျ။ဆကျလကျ မညညျးနိုငျတော့လောကျအောငျ အားအငျကုနျခမျးသလိုဖွဈသှားပွီး ငွိမျသှားရတယျ။မောငျ ကတော့ မကျြလုံးစုံမှိတျပွီးဆကျလုပျရာ ယမငျးလဲသူပွီးအောငျလုပျပါစေ ဆိုပွီးလှတျ ထားလိုကျတယျ။ယမငျးပွီးပွီး ငါးမိနဈ ခနျ့ကွာသောအခါမှာတော့ မောငျဆီက “အငျးးအားးး ရှီးးးရှီး ဟားးး” တနှာသံထှကျလာပွီးအတငျးလိုး တော့တယျ။မကွာပါဘူး၊ ပိပိထဲပူ နှေးနှေးသုတျတှဝေငျလာပွီးမောငျကသူ့လီးကွီးကိုအဆုံးထိသှငျးပွီး နောကျကော့ပွီးပနျးထညျ့လိုကျရာအဖုတျထဲသုတျ ရညျတို့ပွညျ့လြှံသှားတော့တယျ ထိုနောကျတော့မောငျကယမငျးကို နမျးကာ “ယမငျးနာသှားလားဟငျ” “အရမျးနာတယျမောငျ” “ဟုတျတယျနာမှာယမငျး၊မောငျ ယမငျးသကျသာအောငျဆေးပေး လိုကျမယျ” “အရေးကွီးတာကယမငျးအရှကျကှဲ မှာပဲ ကွောကျတယျမောငျ” “အဲဒီအတှကျလဲမပူပါနဲ့ယမငျး၊ဒီမှာ ဆေးတှရှေိပါတယျ” “ဟုတျကဲ့ပါမောငျ” ဆေးတှတေိုကျတော့ယမငျး သောကျ လိုကျတယျ။ညနစေောငျးတော့ယ မငျးတို့အိမျပွနျခဲ့ကွသညျ။
နောကျရကျတော့မောငျရနျကုနျပွနျ သှားတော့လှမျးရသူမှာ ယမငျးဖွဈ သညျ။လှမျးရတိုငျးမောငျ့အတှကျ ရညျစူးပွီးဘုရားတှငျပနျး လှူပွီး မောငျတဈယောကျသှားလရော ခလုတျမထိစူးမငွိစကွေောငျးအခါ ခါဆုတောငျးမိသညျ။ “ယမငျးရေ” “လာဟေ့ တငျ တငျ” “လှမျးနတောလား” “ဘာကိုလှမျးရမှာလဲ” “ကောငျမ ငါမသိတာကလြို့” ယမငျးထိတျလနျ့သှားသညျ။ ဘာတှမြေားတငျ တငျသိနသေလဲဟူ၍ပငျ “နငျလေ ဆရာလေးကိုခဈြနတော မဟုတျလား” “ကိုယျကသာခဈြရပမေယျ့သူက ကိုယျ့ကိုသတိတောငျ ရပါ့မလား၊ မွို့သူအခြောအလှတှနေဲ့ပြျောနေ မှာပါဟယျ” “အငျးလေ” “သူကခဈြတယျဆိုပါဦးတော့၊ဘကွီးအောငျမောငျးကရော ငါလိုမုဆိုးမ သမီးနှငျ့သဘောတူနိုငျပါ့မလား” “ဒီမှာယမငျး၊ဘကွီးအောငျမောငျး ကသူ့သားသာရှာသူတဈယောကျ ယောကျနဲ့ ကွိုကျပွီးသူ့သားရှာမှာအ ခွခေတြာကိုလိုလားတယျသိလား” “ရှာမှာလညျးပိုကျဆံရှိအသိုငျးအ ဝိုငျးတှပေေါတယျလေ” “အမ လေးသူ့သားသာတကယျခဈြလို့ကတော့ကွိုကျတဲ့သူနဲ့ပေးစား ခငျြနတောဟ” “ဟုတျရဲ့လားတငျတငျရယျ၊မိဘဆိုတာသားသမီးကို ဆငျစီးလို့မွငျးရံ တာပဲမွငျခငျြကွတာလေ”
“အေးနှျော အဲဒါလဲဟုတျသားပဲ” တကယျတမျးမှာရငျမောရသူက ယမငျးပါ။ဘဝမှာမောငျ့တဈယောကျတညျးခဈြမိပွီးမောငျ့ကိုပဲတ သကျလုံးပွုစုစောငျ့ရှောကျခငျြ တယျ။မိမိကိုမခဈြလို့ပဈခှာသှား လညျးမိမိအပြိူစငျဘဝကိုယူသှား တဲ့မောငျ့ကိုအပွဈမမွငျ တဲ့အခဈြနဲ့ ဆကျခဈြသှားမှာပါ “မောငျရယျ ယမငျးအရမျးလှမျးရ တယျကှာ” ဒီလိုနဲ့သုံးလလောကျအထိမောငျက ရှာကို အဆကျအသှယျမလုပျပဲ နလောခဲ့တယျ။ဒါပမေယျ့လဲယမငျး ကတော့ဥပုတျနတေို့ငျးမောငျ့ကိုရညျ စူးပွီးဘုရားမှာပနျးလှူနဆေဲပါ။တနတေ့ော့ “ယမာဒဒဒးရေ “ဘာလဲတငျတငျ” “ငါရနျကုနျကိုခနသှားခငျြတာ၊ငါ့ တို့ဒျေါလေးနမေကောငျးလို့တဲ့လှမျး ချေါတယျ၊ ငါတဈယောကျတညျးလဲ မသှားရဲဘူး၊နငျအဖျောလိုကျခဲ့ပေး ပါလားဟယျ” ယမငျးလဲမောငျ့ကိုတှခေ့ငျြနတော နှငျ့ “ငါအမကေို့ ပွောရဦးမယျ” “ငါလဲကူပွောပေးပါ့မယျယမငျး” တငျတငျအဒျေါနမေကောငျးတာယ
မငျးအမသေိလို့ယမငျးအားတငျ တငျနဲ့အတူ ရနျကုနျကိုလှတျပါတယျ။ ရနျကုနျကိုရောကျပွီးတငျတငျအဒျေါ တကျနတေဲ့ဆေးရုံကိုရောကျခဲ့တယျ။တငျတငျ့အဒျေါအတှကျဆေး ယူနေ စဉျမှာဂြူတီကုတျနဲ့ဆရာဝနျနှဈ ယောကျအပွငျထှကျသှားတာကိုသ တိထားမိတဲ့တငျတငျက “ယမငျးဟိုမှာဆရာလေး မဟုတျ လား” “ဘယျမှာလဲ” “ဟိုမှာလေ၊ကားပါကငျဘကျသှား နတော” ယမငျးလှမျးကွညျ့လိုကျတော့မောငျ မှမောငျအစဈ ဖွဈနတေယျ မောငျကဆရာဝနျမလေးတဈယောကျလကျကိုကိုငျပွီးကားပါကငျကို သှားနတေယျ။ပွီးတော့ကားတံခါး ကိုဖှငျ့ပွီး မောငျးသူဘေးကထိုငျကာ ဟိုဆရာဝနျမလေးကမောငျးသူ ဘကျကထိုငျကာမောငျးထှကျသှား တော့တယျ။
ရငျထဲမှာမခြိအောငျနာမိတယျ။မကျြ ရညျတှတေလိမျ့လိမျ့ကလြာတော့ “ယမငျးစိတျထိနျးလယေမငျး” “ငါဘာမှမဖွဈပါဘူးဟာ” “တောကျ..လုပျရကျတာဟာ” “ထားလိုကျပါတငျတငျရယျ” “နငျကသာထားလိုကျပါ၊ငါရှာပွနျ ရောကျရငျဘကွီးအောငျမောငျး ကို ပွောရမှာ” “ထားလိုကျပါတငျတငျ၊ငါ့ကိစ်စကို ငါရှငျးပါ့မယျ” “အေးပါသူငယျခငျြးရယျ” ယမငျးကဆေးခနျးရှကေ့စုံစမျးရေး ကောငျတာကိုသှားပွီး “ညီမလေး ဒေါကျတာခနျ့ထကျ ကြျောကဒီဆေးရုံမှာလုပျတာလား” “ဘာဖွဈလို့လဲမမ” “ခုနကတှလေို့ကျ လို့” “မမနဲ့ဘာတျောလို့လဲ” “မမကသူတို့ရှာကရပျဆှရေပျမြိုး တှပေါညီမလေး” “အျော ဟုတျလား မမ” “ခုနကသူနဲ့အတူပါသှား တဲ့ဒေါကျ တာကရော” “သူတို့ကခဈြသူတှလေမေမ” “အျော” “မမကျမဘာကူညီရမလဲ” “ရပါတယျညီမလေး၊ကြေးဇူးပါ ညီမ လေး” ပိုသခြောသှားပွီ၊ယမငျးကိုခဈြတယျ ဆိုတဲ့မောငျကယမငျးအပွငျနောကျ တဈယောကျထားနတောပဲ နောကျတနတေ့ော့ ယမငျးမောငျ့ကို မပွောမဖွဈပွောမှဖွဈမယျဆိုပွီး မောငျရှိရာကိုရှာလိုကျတယျ။
မောငျ့ ကိုမောငျ့ကောငျမလေးနဲ့တှတေ့ယျ “မောငျ” “ဟငျယမငျး” “ဘာ ဘာလာလုပျတာလဲယမငျး” “မောငျ့ကိုသတိရလို့လှမျးလို့မောငျ့ ကိုလာတှတေ့ာပါ” “ကိုကိုအဲဒါ ဘယျသူလဲ” “ဒေါကျတာ မောငျကအမရဲ့ခဈြသူ ပါ” “ယမငျး မငျးးမငျးးဘာတှပွေောနေ တာလဲ” “ယမငျးအမှနျအတိုငျးပွောတာ ပါ ဒေါကျတာ” “ယမငျး မငျးကှာ” မအျောစဖူးအျောငေါကျနတေဲ့မောငျ့ ကိုကွညျ့ကာယမငျးမကျြရညျဝဲလာ တယျ” “မောငျ ယမငျးကိုမနေို့ငျပွီမဟုတျ လား၊မလေို့ကျပါမောငျ၊ယမငျးက မောငျခဈြခဲ့တဲ့အညတရတောသူပါ မောငျရယျ။မောငျတို့နဲ့ အဆငျ့အတနျးတူတဲ့သူကိုရှေးခယျြတာမောငျမှနျ ပါတယျ။မောငျ့ကိုယမငျးမမုနျးရကျ နိုငျပါဘူးမောငျ” ယမငျးပွောပွီးထှကျခဲ့ တယျ။ဒါပေ မယျ့နောကျကအသံတှကေိုကွားနေ ရဆဲပါ။
“ဒီမှာကိုကို ၊ကိုကိုဘာတှရှေုပျခဲ့တာ လဲ၊ရှဇေငျ့ကိုတမငျမြားအရှကျခှဲ နေ တာလားကိုကို၊ဒါမြိုးတော့လာမကြောနဲ့ကိုကို၊ကိုကိုရှဇေငျ့ကိုရှေးမှာ လာ၊ဒါမှမဟုတျအဲဒီတောသူကိုရှေး မှာလား၊ပွတျပွတျ သားသားလုပျ၊ အဲဒီတောသူကိုရှေးခငျြရငျလိုကျ သှား၊ရှဇေငျ့အတှကျယောကျြားမရှားဘူး” “ရှဇေငျ ရှဇေငျ” ယမငျးနောကျက မောငျလိုကျမလာခဲ့ ပါ။ဒါပမေယျ့ယမငျးကနြေပျပါတယျလေ။ယမငျးရှာပွနျခဲ့တယျ။ မောငျ့ကိုမုနျးမရတဲ့အပွငျပိုလို့တောငျလှမျးမိ တယျ။ဆရာဝနျမရှိတဲ့ဆေးရုံရှရေောကျတိုငျးပေါ့။တနှဈတောငျ ကွာခဲ့ပွီလေ။အခုလဲမောငျ့အတှကျ မောငျ့မှေးနမှေ့ာရညျစူးပွီး ဘုရား မှာပနျးလှူပွီးပွနျခဲ့တယျ။အမကေ ရိပျမိပွီးဘာမှမပွောတော့ပေ။ ညကိုးနာရီခနျ့ရောကျတော့ “ဟခေ့ငျလှ ခငျလှ” ဘကွီးအောငျမောငျးကအမနေ့ာ မညျကိုခွံရှကေ့ချေါတယျ “လာပွီ၊လာပွီကိုကွီးအောငျမောငျး၊ဘာကိစ်စမြားအရေးတကွီးရှိလို့ည ကွီးမငျးကွီး” တံခါးဖှငျ့ရငျးအမကေမေးတယျ
“အေးအရေးကွီးတယျ၊ဘယျမှာလဲ နငျ့သမီးယမငျးသူဇာ” “ရှငျ ဘကွီးသမီး ရှိတယျ” “ခနလာခဲ့ဦးသမီး” “ဟုတျကဲ့ဘကွီး” ယမငျးသူဇာ ခွံဝဘကျကိုထှကျ လိုကျပွီးဘကွီးကိုတှတေ့ယျ။ “မခငျလှ” “ရှငျ ကိုအောငျမောငျး” “ငါတဈခုပွောမယျ၊နငျ့ကိုအားမနာ လို့မဟုတျဘူးနှျော” “ရှငျဘာမြားဖွဈလို့လဲကိုအောငျ မောငျး” “ငါလူဆိုး ဖမျးလာတယျ” “ဟငျဘယျမှာလဲလူဆိုး” အထိတျတလနျ့နဲ့မေးလိုကျတယျ “ဟကေ့ောငျလာခဲ့စမျး” “ဟုတျကဲ့အဖေ” ဘကွီး နောကျကအသံထှကျလာပွီး အိတျတဈလုံးနှငျ့မောငျ့ကိုတှလေို့ကျရတယျ။မောငျ့ပုံကညငျးသိုးသိုးပုံ ဖွဈပွီးဆံပငျမြားပငျရှညျနေ တယျ။
“ဟငျ မောငျ” “မခငျလှဖွဈသမြှအကွောငျးကို ငါနငျ့ကိုတောငျးပနျပါတယျ။နောကျ မှလူကွီးစုံရာနှငျ့လာတောငျးပနျပါ့ မယျ” “ဟုတျဟုတျ” ဘာမှနျးမသိပဲအမကေတဟုတျဟုတျဖွဈနရှောတယျ။ “သမီးယမငျး၊ဒီကောငျအရကျသ မားဖွဈနပွေီသိလား၊အ ရငျကအ ကွောငျးတှကေိုခှငျ့လှတျပွီးငါ့သား ကိုပွုပွငျပေးဖို့သမီးဆီငါအပျတယျ၊ ဟကေ့ောငျသမီးကိုတောငျးပနျလိုကျ” “ဟုတျကဲ့ပါအဖေ” “မခငျလှ ငါ့သားကိုဒီမှာပဲသိပျလိုကျ တော့မနကျဖွနျငါရှာကရပျမိရပျဖ တှကေိုပွောပွီးမင်ျဂလာရကျမွနျးမယျ” “ရှငျ” “အမလေးကိုအောငျမောငျး၊ဒီကိစ်စ ဆိုတာဟငျးရှကျကနျစှနျးရှကျဝယျ သလိုမြိူးမဟုတျဘူးနှျော၊သမီးသ ဘောထားကိုမေး ဦး” “ယမငျးသမီးသဘောထားက ဘယျလိုလဲ” “သမီးမောငျ့ကိုခဈြတယျမမေေ” “အေးပွီးရော၊ရပွီကိုအောငျမောငျး၊ မနကျဖွနျသာလူကွီးစုံရာနဲ့လာခဲ့ ကမြပွငျဆငျထားလိုကျပါ့မယျ” “အေးကြေးဇူးပါမခငျလှ၊ငါစိတျခြ လကျခထြားခဲ့ပွီ” ဦး အောငျမောငျးကထှကျသှားတော့ ခွံဝမှာသုံးယောကျသားကနျြခဲ့တယျ “သမီး အိမျထဲဝငျ” “ဟုတျကဲ့မမေေ” ယမငျးစိတျမခစြှာ မောငျ့ကိုကွညျ့ နတေော့ “သားလဲလိုကျသှားလေ” “ဟုတျကဲ့အမေ” အိမျထဲရောကျတော့ “သားထမငျးစားပွီးပွီလား” “မစားရ သေးဘူးအမေ”
“သမီးနငျယောကျြားရပွီ၊နငျ့ကိစ်စ နငျရှငျးတော့ငါတော့အိပျပွီ” အမကေို့ယမငျးမကျြနှာပူမိတယျ။ အမကေလဲရိပျမိပုံပျေါပါတယျ။ ဒါ ကွောငျ့စောစောစီးစီးအိပျရာထဲဝငျသှားတော့တယျ။ “မောငျရခြေိုးလေ” “ဘယျမှာခြိုးရမလဲယမငျး” “ယမငျးပွမယျ” ယမငျး မောငျရခြေိုးမယျ့နရောကို လိုကျပွတော့ “ယမငျးမောငျ့ကိုစိတျမဆိုးဘူးလား” “မဆိုးပါဘူးမောငျရယျ” “မောငျ့ကိုခှငျ့လှတျပါ ယမငျး၊မောငျ လယေမငျးအပျေါသစ်စာရှိစှာနဲ့တ သကျလုံးရိုးမွကေခြဈြသှားပါ့မယျ” “ယမငျးယုံပါတယျမောငျ၊ရအေရငျ ခြိုးလိုကျ နှျောမောငျ၊မွနျမွနျခြိုးအ အေးမိမယျ၊ယမငျးမောငျ့အတှကျ တမငျးပှဲပွငျလိုကျမယျ” “ဟုတျကဲ့ပါယမငျး” မောငျရခြေိုးပွီးရငျစား ထမငျးပှဲ ပွငျလိုကျတယျ။မောငျရခြေိုးပွီး အဝတျအစားလဲကာထမငျးစား တယျ။ထမငျးစားပွီးတော့ “အိပျကွမယျယမငျး” “ဟုတျကဲ့မောငျ” ယမငျးအိပျခနျးထဲကိုပဲမောငျ့ကိုချေါ လိုကျတော့မောငျကပွုံးပွီးတဈခါမှမပိတျဖူးသောယမငျးအိပျခနျးတံခါး ကို ပိတျပွီးမီးမှိတျလိုကျတော့တယျ။ (ကနျြတဲ့အပိုငျးကိုယျ့ဟာကိုယျတှေး)
“မောင် ..ယမင်းလေမောင့်မွေးနေ့မှာ ဘုရားမှာပန်းလှူပြီးကုသိုလ်ဒါနပြု ပါတယ်မောင်၊မောင်စိမ်းကားပစ်ခွာ သွားပေမယ့်ယမင်း လေမောင့်ကို ချစ်နေဆဲပါမောင်၊မောင်တစ်ယောက်အသက်ရှည်လို့ဘုန်းကြီးပါစေ၊ သွားလေရာခုလုတ်မထိစူးမငြိပါစေ နဲ့မောင် ရယ်” ဘုရားမှာမောင့်အတွက်ရည်စူးပြီး စပါယ်ပန်းတွေကပ်လှူးရင်းဆု တောင်းကာဦးချကန်တော့ပြီးဘုရား ရင်ပြင်ပေါ်ကနေ ယမင်းတစ် ယောက်ဆင်းလာခဲ့တော့တယ်။ ဘုရားပေါ်တက်လာတဲ့ဦးအောင် မောင်းတစ်ယောက်ယမင်းကို မြင်ပြီးပြုံးပြီး ကြည့်နေလိုက်ကာ သားအတွက်ဘုရားပန်းနှင့်ဆွမ်းကပ် လှူလိုက်တယ် “မိုက်လိုက်တဲ့သား၊မင်းအတွက် ကလေးမလေးက ဘုရားမှာလာဆု တောင်းနေတယ်သား” မိန်းကလေးအတွက်စိတ်မကောင်း ဖြစ်ကာသားကိုစိတ်ထဲကဒေါသ ထွက်မိတယ်။ဦး အောင်မောင်းဟာ ဒီရွာသား၊ဒီရွာရဲ့သူကြီး ၊အားလုံး ကလေးစားရတဲ့လူ၊အခုတော့သား လုပ်ရပ်ကြောင့်ဦးအောင်မောင်း ယမင်း နှင့်သူမမိခင်ကိုမျက်နှာ ပူနေမိတယ်။
ဦးအောင်မောင်းဟာ ညီဖြစ်သူအစာဆိပ်ဖြစ်ပြီးမျက်စိ ရှေ့မှာသေဆုံးခဲ့တာကိုမြင်ခဲ့ရတဲ့အ တွက် သားဖြစ်သူကိုဆရာဝန်ဖြစ်ရ မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့မလှိုင် မှာသားကိုကျောင်းအိပ်ကျောင်းစား ထားကာပညာသင် စေခဲ့လူ၊မိမိရွာကို တိုက်နယ်အဆင့်အထိဖြစ်အောင် ကြိုးစားပြီးဆေးရုံတစ်ရုံရဖို့ကြိုး စားနေတဲ့လူ၊ရွာသားတိုင်းကဦး အောင် မောင်းရဲ့စေတနာကိုနား လည်တော့လေးစားကြရတယ်။မိမိ ငွေကိုအကုန်ခံပြီးအစိုးရဆီမှာဆေး ရုံရဖို့ကြိုးစားခဲ့တော့အစိုးရရဲ့ စေ တနာနဲ့ဆယ့်ခြောက်ကုတင်ဆန့် ဆေးရုံလေးတစ်ရုံကိုတည်ဆောက် ပြီးဖြစ်ပေမယ့်ဆရာဝန်ကတော့မရှိသေးပါဘူး၊ဆေး ကျောင်းပြီးလာတဲ့ သားကိုရွာကိုပြန်လာခိုင်းပေမယ့် သားလေးခန့်ထက်ကျော်ကအမြဲနေမယ်မပြောတဲ့အခါ၊အလည်တစ် ခေါက် တော့လာဖို့ခေါ်တာကြောင့် သားဖြစ်သူရွာကိုလာခဲ့တယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲယမင်းတစ်ယောက် လှည်းပေါ်ကအဆင်းခြေခေါက်လဲ တာကြောင့်လမ်းမလျောက်နိုင်တဲ့ အခါမှာ “အား ကျွတ် ကျွတ် ကျွတ်” “ဟေ့ယမင်း နင့်ခြေထောက်က အရမ်းရောင်နေတယ်” “အေးဟယ်တင်တင်ရယ်၊ဆေးခန်း ပြ ဖို့ကလဲမြို့ကအဝေးကြီး၊ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိတော့ပါဘူးဟယ်”
“နေဦးယမင်း၊ဘကြီးအောင်မောင်း သားရွာရောက်နေတယ်ဟဲ့၊အဲဒါ ငါသွားခေါ်လိုက်မယ်” “ဘာကြောင့်ဘကြီးဦးအောင်မင်း သားကိုခေါ်ရမှာလဲတင်တင်ရဲ့” “သူကဆရာဝန်လေ” “ဟုတ်လားတင်တင် ဘကြီးအောင်မောင်းမှာသား တစ်ယောက်ရှိတယ် ဆိုတော့ယမင်းသိပါတယ်၊ဒါပေမယ့်ဆရာဝန်ဖြစ် မှန်းတော့မသိခဲ့ပါ။ယမင်းတို့အဖေ တပ်မှာတိုက်ပွဲကျတော့အမေကသူ မွေး ဖွားခဲ့ရာဒီရွာလေးမှာပြန်ုပီးအ ခြေချခဲ့တာမို့ဒီရွာလေးကိုရောက်ရှိ ရခြင်းဖြစ်တယ်။ရွာသူဆိုပေမယ့် ယမင်းဟာအလှပဂေးတစ် ယောက် ပါပဲ။လုံးကြီးပေါက်လှပေါ့။ခုခေတ် စကားအရအကိတ်ပါ။သေးတဲ့မ လျော်ညီစွာတင်သားလုံးလုံးကြီး တွေနဲ့အိုးကားပါ တယ်။ရင်သားက တော့အရမ်းမကြီးပါဘူး။ရွာကကာ လသားတွေကြိုက်ကျပေမယ့်အနေ တည်တဲ့ယမင်းကိုမစရဲကြဘူး။မု ဆိုး မသမီးပေမယ့်ဗိုင်းကောင်းကျောက်ဖိနေတဲ့ယမင်းရဲဂုဏ်သတင်း ဟာအစွန်းအထင်းမဲ့ပြီးလေးစားရတဲ့အနေအထားပါပဲ။ “ယမင်း ရေ “ “လာလေတင်တင်” တင်တင်နဲ့အတူအမျိုးသားတစ် ယောက်ပါလာတယ်။ထိုအမျိုးသား ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ယမင်းရင်ထဲနွေး ထွေးတဲ့ခံစားမှု့တခုကိုရရှိလိုက်ရ တဲ့ယမင်းပါးပြင်မှာရှက်သွေးရယ် ဖြာထွက်မိတော့တယ်။တစ်ခါမှမဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဖူးတဲ့ချစ် စိတ်ဟာခုမှမြင်ဖူး တဲ့လူတစ်ယောက်အပေါ်ယိုဖိတ်စီး ဆင်းခဲ့ရတယ်။
“ယမင်းရေ၊ဒီမှာဆရာလေး ခန့်ထက်ကျော်ပါလာပြီ” “ဟုတ် ဟုတ်ကဲ့ကြွပါရှင်” “ခြေထောက်နာနေလို့ဆို” “ဟုတ် ဟုတ်ကဲ့ရှင့်” “ကျနော် ခဏ ကိုင်ကြည့်မယ်နှော်” “အိုး အားနာစရာ” “ဘာမှအားမနာနဲ့ကျနော်ဆရာဝန် ပါ” “ဟုတ်ကဲ့ရှင့်” ဆရာလေးက ယမင်းရဲ့ခြေထောက် ကိုအသေအချာကိုင်တွယ်စမ်းသပ် ပြီးနောက်တော့ “သိပ်တော့စိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူး။ ခြေခေါက်လဲပြီး အကြောတွေ ယောင်ရမ်းနေတာ၊ဆေးလိမ်းဆေး သောက်လုပ်ရင်ပျောက်ပါတယ်။ ကျနော်ဆေးလိမ်းပြီးဆေးတွေပေး ခဲ့ပါ့မယ်” ယမင်းမှာတော့ဆရာလေးရဲ့ကိုင် တွယ်စမ်းသတ်မှု့မှာရင်ခုန်သံတွေ မြန်လာတော့ဆရာလေးမသိအောင် ဟန်ဆောင်ကာနေရ တော့တယ်။ ခြေထောက်ကိုဆေးလိမ်းပြီးပတ် တီးစည်းနှောင်ပေးကာလက်ဆေး ပြီးသောက်ဆေးတွေပေးပါတယ်။
“ကဲကျနော်ပြန်တော့မယ်” “ဆရာရယ်ခြေကြွခလေးယူသွား ပါရှင့်” “နေပါစေဗျာ၊တစ်ရွာတည်းသား ချင်းတွေမယူပါရစေနဲ့” “ကျေးဇူးတင်လို့ပါဆရာရယ်၊ဆရာ့ ကိုမြို့မပြန်ခင်ထမင်းတစ်နပ်တော့ ဖိတ်ကျွေးခွင့်ပြုပါရှင်” “ခြေထောက်သက်သာသွားရင် ကျွေးပါဗျာ” “ဟုတ်ကဲ့ဆရာလေး” ဆရာလေးအိမ်ပေါ်ကဆင်းသွား တော့ဆရာလေးကျောပြင်ကိုငေး မောကြည့်ကြည့်ပြီးကျန် ခဲ့ရတဲ့ယ မင်းမှာဝေဒနာတစ်ခုခံစားရပြန် တယ်။ဒီလိုနဲ့သုံးရက်လောက်မှာယ မင်းခြေထောက်သက်သာလာတယ်။ “ယမင်း ခြေထောက်သက်သာ ပြီမဟုတ်လား” “အေးတင်တင်” “သက်သာရင်ရွာမှာလုပ်အားပေး ဖို့ခေါ်မလို့” “ဟင် ဘာလုပ်အားပေးရ မှာလဲ” “နင့်ဆရာလေးလေ ခုရွာကလူတွေ ကိုဘကြီးအောင်မောင်းအိမ်ကနေပြီးဆေးကုပေးနေတာ၊လူလိုတယ်” “နင်သွားပြီး လုပ်အားပေးလိုက်လေ” “ငါလဲလုပ်ပေးနေတာ၊နီးနားပတ် ဝန်းကျင်ကလူတွေပါရောက်လာလို့ မနိုင်ဘူး၊အခုဆေးရုံကိုရွှေ့ပြီးကု သပေးနေရတယ်၊အဲဒါနင့်လာခေါ်တာ” “အေးပါဟယ်၊ငါကူညီပါ့မယ်” ယမင်းနှင့်တင်တင်မှာဆေးရုံကိုသွားပြီးအကူအညီသွားပေး ကြရတယ်။
ဘကြီးဦးအောင်မောင်းတစ်ယောက် မျက်နှာမှာအပျော်တွေနဲ့မြင်ရတော့ ယမင်းစိတ်ချမ်းသာမိတယ်။ “ဟာ ယမင်းလိုက်လာ တယ်” “ဟုတ်တယ်ဆရာ၊လူလိုတယ်ဆိုလို့” “ခြေထောက်သက်သာသွားပြီလား” “သက်သာသွားပြီဆရာ” “ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ ဗျာ” ဆရာဝန်လေးဟာလူနာတွေတစ် ယောက်ပြီးတစ်ယောက်စမ်းသတ် ကုသပေးနေတယ်။ယမင်းတို့က တော့လူနာကို အလှည့်ကျခေါ်ပေး တယ်။ဆရာဝန်လေးပြောတဲ့ဆေး တွေကိုပေးတယ်။နေ့လည်ကျတော့ ခနနားကြတယ်။ဦးအောင်မောင်း အိမ် ကစားစရာတွေလာပေးတော့ စားသောက်ကြရင်း “ယမင်းတို့လာကူညီတော့အားရှိ တယ်ဗျာ။အဖေကသူ့ရွာကိုရောက် တော့ နာတွေဆေးကုပေးခဲ့ပါဆို လို့ကျနော်ကုနေရတာ” “ကုသိုလ်ရပါတယ်ဆရာ” “ကုသိုလ်ရတာတော့မှန်ပါတယ်၊အဖေကရွာမှာနေ စေချင်တယ်၊ဒါပေ မယ့်ကျနော်ကရွာမှာနေရတာအ ဆင်မပြေဘူးဗျာ။ကျနော်ကအထူးကုဖြစ်ချင်တော့ရန်ကုန်မှာပဲအဆင်ပြေ တယ်” “ဟုတ်တာပေါ့ဆရာရယ်၊အခုလိုမျိုး ကျမတို့ရွာမှာဆရာ့လိုစေတနာမေတ္တာနှင့်ကုသပေးမယ့်ဆရာဝန်တစ် ယောက် လိုအပ်နေတာ” “သိပါတယ် ယမင်းရယ်” “ဆရာရွာမှာမပျော်တာမြို့မှာရှိတဲ့ ချစ်သူကိုများလွမ်းနေလို့လား”
“မဟုတ်ရပါဘူးဗျာ၊ ကျနော်မှာလွမ်းရမယ့်သူမရှိသေးပါဘူး” ယမင်းမေးချင်နေတဲ့မေးခွန်းကိုသိလိုက်ရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဝမ်းသာမိ တယ်။ဘာကြောင့် မှန်းမသိပါဘူး၊ဆရာလေးအနားနေရတာယမင်းအရမ်းပျော်နေမိတယ်။ဆရာလေးမျက်နှာ ကိုလည်းခနခနငေးမောကြည့်မိတယ်။ “အော်ဆရာရယ် မပြန်ပါနဲ့လား၊ယမင်းဆရာပြန်သွား ရင်လွမ်းနေရတော့မှာ” ရင်ထဲကနေပြီးတွေးနေမိတယ်။ဆ ရာလေးကို ယမင်းချစ်မိနေပြီလေ။ “ယမင်းမနက်ဖြန်ဥပုတ်နေ့လေ၊နင် ဘုရားသွားဦးမလား” “အေးလေသွားမှာပေါ့” “မယမင်းကဥပုတ်နေ့ တိုင်းဘုရား သွားတာလား” “ဟုတ်တယ်ဆရာ” “ဘယ်သူ့အတွက်များဆုတောင်း ပေးနေတာလဲ” “ဆုတောင်းတာတော့မဟုတ် ဘူး ဆရာ၊ဥပုတ်နေ့တိုင်းဘုရားရင်ပြင် ကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်တယ်၊ပန်းဆီမီး ကပ်တာပါ” “အော် ဟုတ်လား” ဒီလိုနဲ့ဆေးခန်းမှာ ဆယ်ရက်ခန့်ဆေး ခန်းထိုင်ပေးပြီးနောက်မှာယမင်းနဲ့ ဆရာလေးတို့တော်တော်ရင်းနီးလာ ကြပြီးဆရာလေးဟာယမင်းထက် တ နှစ်လောက်ငယ်မှန်းသိလာတယ်။
တင်တင်ကယမင်းနဲ့ဆရာလေးစ ကားပြောနေရင်မသိမသာနဲ့ရှောင်ထွက်ပေးတတ်တယ်။တနေ့တော့ “ယမင်းကျနော်ပြန်ရတော့ မယ်ဗျ” “ရှင် ဘာလို့လဲဆရာ” “ကျနော်ရန်ကုန်ကအထူးကုဆေးရုံ ကြီးတစ်ခုမှာအလုပ်လျောက်ထားတာရပြီ” “အော် ..ဆရာ ရယ်” ရင်ထဲဆွေးမြေ့သွားရတဲ့သူက ယမင်းသူဇာရယ်ပါ၊ “ဆရာကတော့ပျော်နေမှာပေါ့နှော်” “ယမင်းရယ် ပျော်ရာမှာမနေရ တော် ရာမှာနေရမယ်မဟုတ်လား၊ကျနော် ဆရာဝန်ကြီးတွေဆီကပညာတွေ ထပ်သင်ရအုံးမယ်လေ” “ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ” “ယမင်းကျနော်စကားတစ်ခုပြော ချင်လို့” “ပြောပါဆရာ၊ယမင်းနားထောင် နေပါတယ်” “ယမင်းကျနော့်ကိုစိတ်မဆိုးပါနဲ့နှော်” “ဆရာရယ်ယမင်းဆရာ့ကိုဘာလို့ စိတ်ဆိုးရမှာလဲ” “ကျနော်ပြောမယ့်စကားကိုသေချာ နားထောင်ပေးပါယမင်း” “ဟုတ်ကဲ့ ဆရာ” “ကျနော်ယမင်းကိုချစ်နေတယ်ဗျာ” “ရှင်” ယမင်းအံ့ဩသင့်သွားတယ်။
မည်သို့ အခါကမှချစ်ဟန်မပြခဲ့တဲ့ဆရာက အခု ကျမှယမင်းကိုချစ်တယ်တဲ့လား အရမ်းလဲဝမ်းသာမိတယ်။ “ယမင်းစိတ်ဆိုးသွားပြီလား” “မဆိုးပါဘူးဆရာ” “ဒီလိုဆိုယမင်းရဲ့ သဘောထားကို ပြောပါဦး” “ဆရာရယ် မိန်းကလေးတစ်ယောက်အနေနဲ့ အခုချစ်ရေးဆို၊အခုအဖြေပေးရ တာတော့မဖြစ်နိုင် ဘူး၊ဒါပေမယ့် ယမင်းကဆရာ့ကိုအရင်ချစ်ခဲ့တာပါ” “ဗျာ..တကယ်နှော်ကျနော်အရမ်း ဝမ်းသာမိတယ်ဗျာ” “ယမင်း” “ရှင် ဆရာ” “ဟာဗျာ အခုထိဆရာပဲလားဗျာ” “ယမင်းကလဲအခေါ်တစ်ခုခုတော့ ပြောင်းသင့်တယ်” “ဟုတ်ကဲ့ပါမောင်” “ဟာ ချစ် လိုက်တာယမင်းရယ်” မောင်ကယမင်းကိုဖက်ပြီးကျမပါး ပြင်ကိုနမ်းလိုက်တော့ယမင်းရင်ထဲ ဗလောင်ဆူသွားတော့တယ်။မိမိ ချစ်ရတဲ့သူတစ်ယောက်ကမိမိကိုဖက်ုပြီးနမ်းရှိုက်တဲ့အခါမှာအဖိုနဲ့ထိတွေ့ မှု့မရှိတဲ့ယမင်းမှာရင်ထဲတသိမ့်သိမ့် တုန်သွားရတာ ပေါ့။မောင့်အနေနဲ့ ကတော့ထူးခြားမယ်မထင်ပါ။လူ နာအမျိုးသမီးများကိုသူကအကြိမ် ကြိမ်ထိတွေ့ဖူးသူလေ။ပြီးတော့ မမြင်ဝံ့ ဆေးသမားခေါ်တာကိုး ယမင်းမှာဖြင့်ပိပိထဲကတောင်စိုချင် သလိုဖြစ်သွားရတယ်။
“ယမင်း မနက်ဥပုတ်နေ့ဘုရားသွား ဦးမှာလား” “သွားရမှာပေါ့မောင်” “မောင်လဲလိုက်ခဲ့မယ်ယမင်း” “လိုက်ခဲ့လေမောင်” ဘုရားကိုမောင်နဲ့အတူသွားလိုက် ကြတယ်။ပြီးတော့ဆေးခန်းကိုသွား တော့ဥပုတ်နေ့မို့ဘယ်သူမှဆေးခန်း ကိုမလာကြပါဘူး။ မောင်နှင့်ယမင်း နှစ်ယောက်တည်းသာရှိတယ်။တင် တင်ကလည်းလူပါးတဲ့ရက်မို့မလာ ဘူးပြောသွားပြီးသူ့အဖေနှင့်အမေ ဥပုတ် စောင့်မှာမို့ဆွမ်းချက်ပို့ရမှာ လို့ပြောသွားတာကြောင့်ဆေးရုံမှာ မောင်နှင့်ယမင်းသာရှိတယ်။နှစ် ယောက်တည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အသိ က ယမင်းရင်ထဲတမျိုးဖြစ်မိတယ်။ဒီ ကြားထဲမောင်ကယမင်းကိုဖက်ပြီး “ယမင်း မောင်အရမ်းချစ်တယ်” “အို! မောင်လွှတ်ကွာ၊ ယမင်းမော လှပြီ” “မလွှတ်ဘူးကွာ၊ဒီနေ့မှမောင်တို့ လွတ်လွတ်လပ်လပ်တွေ့ရတာ” “မောင်ကလဲအဆိုးနဲ့ကွာ” “ချစ်လို့ပါယမင်း ရယ်” မောင်ကယမင်းကိုဖက်ပြီးယမင်း နှုတ်ခမ်းကိုလာနမ်းစုပ်တယ်။ယမင်း ရင်ထဲတမျိုးကြီးခံစားရတယ်ရှင်။ တလှိုက်လှိုက် တက်လာတဲ့ရင်ခုန် မှု့နဲ့အတူပိပိအတွင်းသားတွေစိုလာ တယ်။ဘာကြောင့်မှန်းရယ်မသိဘူး မောင့်အနမ်းကိုယမင်းပြန်တုန့်ပြန် မိ တယ်။နောက်တော့မောင်ကဆေးခန်းရဲ့တံခါးကိုပိတ်လိုက်တယ်
“မောင် ဘာလို့ပိတ်တာလဲကွယ်” “တခြားလူတွေမြင်မှာစိုးလို့ပါ” “အာမောင်ကလဲလူတွေလာရင်ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ” “ဒီနေ့မလာပါဘူးယမင်းရယ်” ပြောရင်းနဲ့ယမင်းကိုပွေ့ချီကာ ဆေးခန်းကလူ နာစမ်းသပ်တဲ့ကုတင်ပေါ်တင်လိုက်ကာအင်္ကျီကြယ်သီး များကိုဖြုတ်ပြီးဘော်လီချိတ်ကို ဖြုတ်တယ် “မောင် ယမင်းကြောက် တယ်” “မကြောက်ပါနဲ့ယမင်းရယ်” တစထက်တစအတင့်ရဲလာတဲ့မောင် ကြောင့်ယမင်းမှာအသက်ရှူတာ မမှန်ချင်တော့ပါဘူး။ ပက်လက်က လေးဖြစ်နေတဲ့ယမင်းပေါင်ကြားကို မောင့်ရဲ့လက်ကရောက်လာတယ်။ ယမင်းတားဆီးနေပေမယ့်အားအင် တွေ ကုန်ခမ်းသလိုဖြစ်နေရတယ်။ ပိပိကိုအပေါ်ကနေအုပ်ကိုင်ပြီးပွတ်ပေးနေတော့ယမင်းဘယ်စိတ်ထိန်း ထားသော်လည်းပိပိကတော့ မထိန်း ပါ။သူ့အလုပ်ကိုသူလုပ်ပြီးအရည် များကအတွင်းခံဘောင်းဘီအထိစိုရွှဲလာသည်။မောင်ကအတွင်းခံ ဘောင်းဘီကိုဆွဲချွတ် တော့ယမင်း မှာမျက်နှာပူပြီးမျက်နှာကိုလက်ဝါး နှင့်အုပ်လိုက်မိတဲ့ခနမှာမောင်က ယမင်းရဲ့ဆီးခုံကြီးပေါ်ကိုမျက်နှာ အပ်ပြီးနမ်း ရှိုက်လေတော့ “ဟာ မောင်မလုပ်ရဘူးလေ၊ဘုန်းကံ တွေနိမ့်ကုန်ပါ့မယ်” စိုးရိမ်တကြီးတားမြစ်လိုက်ပေမယ့် မောင်ကယမင်းရဲ့ပိ ပိကိုလျှာပြား ကြီးနဲ့အပြားလိုက်ယက်ချလိုက် တယ်။
“အိုး !မောင်မလုပ်ရဘူးလေကွယ်” မည်သို့ပင်တားဆီးစေကာမူမောင့် လျှာဖျားကယမင်းရဲ့အဖုတ်အကွဲ ကြောင်းထဲတိုးချဲ့၍ဝင် လာသည်။ “အာ့ ! အင်းးဟင်းးးဟင်းးး” “အား မောင် မလုပ်နဲ့ကွာ၊အား ကျွတ် ကျွတ်” မျက်လုံးကိုစုံမှိတ်ပြီးအော်လိုက် သည်။ ကြက်သီးထပြီးခါးပါကော့ သွားရတယ်။ပထမဆုံးပိပိယက်ခံရတဲ့ဝေဒနာကိုခံစားလိုက်ရပြန်သည်တားမြစ်နေပေမယ့်လုပ်ချင်ရာ လုပ်လုပ်နေသောမောင့်ကိုစိတ်မဆိုးမိပဲအားနာလှ သည်။ဘုန်းနိမ့်မှာလဲစိုးရိမ်သွားပြီး အတင်းပင်ကိုမောင့်လက်ကိုဆွဲယူ လိုက် ရာမောင်ကအလိုက်သင့်ပါပြီးယမင်းရဲ့အပေါ်တက်လာကာ ယမင်းပေါင်နှစ်ဘက်ကိုကားပြီး ဒူးထောက်လိုက်သည်။ထိုနောက့် ယမင်းပိပိအဝကိုတေ့ပြီးအသာဖိ ထည့်တော့ “ဗျစ် ဗျစ်ဗြိ” “အာ့! မောင်နာတယ်” အလိုးခံရပြီဆိုတဲ့အသိကရင်ထဲ လှိုက်ကနဲ ဝင်လာပြီးအပျိုရည်ပျက် ပြီဆိုပြီးစိတ်ထဲခံစားရပြီးဗိုက်ကြီး မှာလဲစိုးရိမ်သွားရသည်။သို့သော် ဗိုက်မကြီးစေရန်ဆေးခန်းတွင်း အသင့်ရှိနေသောတားဆေးအား သောက်လျှင်ရသည့်အတွက်စိုးရိမ်စိတ်ကလျော့ပါးစေသည်။ထို့အတူ သိပ်ချစ်ရတဲ့မောင့် အတွက်ယမင်း ရဲ့အပျိုစင်ဘဝကိုပေးဆပ်ရတာလဲကျေနပ်ပါတယ်” မောင်ကယမင်းရဲ့နှုတ်ခမ်းကိုစုပ် နမ်းပြန်တယ်။စိတ်ထဲ ဘယ်လိုဖြစ်ရသည်ကိုနားမလည်နိုင်ပေ။ စိုးရိမ်စိတ်တို့လျော့ပါးလာပြီးကာမ စိတ်တို့ပြန်သက်ရောက်လာကာ ပြန်ပြီးစုပ်နမ်းမိ တော့တယ်။နာကျင်ခြင်းဝေဒနာကပိပိထဲမသက်ရောက်တော့ပဲစိတ်လှုပ်ရှားမှု့နဲ့အတူပိပိအ တွင်းသားကစုပ်ယူသလိုလှုပ်ရှား လာ တော့ယမင်းလဲအံ့ဩမိတယ်။
မောင်ကတော့စုပ်နမ်းပြီးနောက် မှာဆတ်ကနဲ့လှုပ်ရှားပြီးဖိသွင်း လိုက်တယ် “ဗျစ် ဗျစ် ဖောက် ဗျိ” “အာ့! အိုး အင်းဟင်းးဟင်း” တိုးဝင်လာတဲ့လီးကြောင့်အပျိုမှေး ဖောက်သွားတာကိုသိလိုက်ပြီးယ မင်းမှာစပ်ဖျင်းဖျင်းဝေဒနာကိုခံစား လိုက်ရသလို ထူးဆန်း တဲ့အရသာ တမျိုးကိုပါပူးတွဲသိလိုက်ရတယ်။ ဆက်ပြီးလိုးမှာကိုလဲကြောက်နေတယ်။မောင်ကတော့ဆက်ပြီးမလှုပ် ရှားပဲလီးကို အဆုံးထိသွင်းထားပြီး ယမင်းနှုတ်ခမ်းကိုစုပ်နမ်းနေပြန် တယ်။မောင့်ကြောင့်နာကျင်ခြင်းဝေဒနာကိုကျေနပ်စွာခံယူမိပြီးမောင်တ စ်ယောက်အဆင်ပြေစေဖို့သာတွေးမိတော့တယ်။ တင်းကျပ်ကျပ်တစ်ဆို့ဆို့ဝေဒနာနှင့်အတူပိပိအတွင်းသားလှုပ်ရှား လာပြီးအရည် တွေပိုထွက်သလိုခံ စားရလာတယ်။တကယ်တမ်းတော့ ယမင်းလဲခံနိုင်ပါပြီသို့သော်မောင်ကဆက်မလှုပ်ရှားပဲယမင်းရဲ့နို့တွေကိုပါ ပွတ်သပ်ပေးတဲ့အခါအလိုလို ညည်းမိတယ်။ညည်းသံထွက်မှ မောင်ကလီးကိုတဖြေးဖြေးနှင့်နှုတ် ယူပြီးဖြေးဖြေးချင်းအသွင်းအ ထုတ် လုပ်တော့တယ်။အစေ့ကိုလဲထိသလိုအတွင်းနှုတ်ခမ်းသားများကိုပွတ် ဆွဲသွားတဲ့မောင့်လီးကြောင့်ပိပိကအရသာတမျိုးကို ပါခံစားလိုက်ရ သည်။
“ဖွတ်!ဖတ်..ဖတ်..ဖတ်” ဆီးခုံချင်းတဖတ်ဖတ်ရိုက်မိနေသလို လီးကတဇွိ ဇွိ တဗျိဗျိ ဝင်နေတော့ မျက်လုံးကိုစုံမှိတ်ပြီးညည်းမိ တော့ တယ်။နည်းနည်းမြန်လေအရသာ တွေ့လေပိုညည်းမိတော့တယ်။ “ဗျစ်! ဘွတ် !ဖတ်! ဖတ် ဖန်းဖန်းးး” “အင့်! အိုးးအင်းးဟ င်းးဟင်းး” ဘယ်လိုသဘောကြောင့်ရယ်ယမင်းမသိတော့မောင့်ခါးကိုသာအတင်း ဖက်ထားပြီး နေချင်တော့တယ်။ ခါးကိုလှမ်း ဖက်တော့လိုးတဲ့အရှိန် နှေးချိန်မှာတော့ယမင်းအား မရတော့ပေ။ခါးကိုလွှတ်လိုက်ပြီး မြန်မြန်ဆောင့်စေဖို့သာခါးကိုလှမ်းဆွဲပြန် တွန်းတဲ့အမှု့ကိုမသိစိတ်ထဲကလုပ်ပေးနေမိပြီးမောင်မြန်လာ သည်နှင့်အမျှ “ဖွတ် ဖတ် ဗျိ ..ဗျစ်ဖန်းးးဖန်းဖန်း” “အာ့!ရှီးးရှီးးး အိုးး အားအင်းဟင်းး” ကြားဖူးနေသောကာမအမှု့ပြီးတယ် ဆိုတာကိုသတိရလိုက်ပြီးအထွဋ်အထိပ်သို့ရောက်နေပြီဆိုတာသိလိုက် ရ တော့တယ်။
“ဘွတ် ဖွတ် ဖွတ် ဖန်း ဖန်းးဖန်း” “အားရှီးးရှီးးအိုးးး” ပိပိအတွင်းလှုပ်ရှားမှု့များနှင့်အတူ ယမင်းမှာအရည်တွေစီးဆင်းသွားသလို ခံစားလိုက်တယ်။ဆက်လက် မညည်းနိုင်တော့လောက်အောင် အားအင်ကုန်ခမ်းသလိုဖြစ်သွားပြီး ငြိမ်သွားရတယ်။မောင် ကတော့ မျက်လုံးစုံမှိတ်ပြီးဆက်လုပ်ရာ ယမင်းလဲသူပြီးအောင်လုပ်ပါစေ ဆိုပြီးလွှတ် ထားလိုက်တယ်။ယမင်းပြီးပြီး ငါးမိနစ် ခန့်ကြာသောအခါမှာတော့ မောင်ဆီက “အင်းးအားးး ရှီးးးရှီး ဟားးး” တနှာသံထွက်လာပြီးအတင်းလိုး တော့တယ်။မကြာပါဘူး၊ ပိပိထဲပူ နွေးနွေးသုတ်တွေဝင်လာပြီးမောင်ကသူ့လီးကြီးကိုအဆုံးထိသွင်းပြီး နောက်ကော့ပြီးပန်းထည့်လိုက်ရာအဖုတ်ထဲသုတ် ရည်တို့ပြည့်လျှံသွားတော့တယ် ထိုနောက်တော့မောင်ကယမင်းကို နမ်းကာ “ယမင်းနာသွားလားဟင်” “အရမ်းနာတယ်မောင်” “ဟုတ်တယ်နာမှာယမင်း၊မောင် ယမင်းသက်သာအောင်ဆေးပေး လိုက်မယ်” “အရေးကြီးတာကယမင်းအရှက်ကွဲ မှာပဲ ကြောက်တယ်မောင်” “အဲဒီအတွက်လဲမပူပါနဲ့ယမင်း၊ဒီမှာ ဆေးတွေရှိပါတယ်” “ဟုတ်ကဲ့ပါမောင်” ဆေးတွေတိုက်တော့ယမင်း သောက် လိုက်တယ်။ညနေစောင်းတော့ယ မင်းတို့အိမ်ပြန်ခဲ့ကြသည်။
နောက်ရက်တော့မောင်ရန်ကုန်ပြန် သွားတော့လွမ်းရသူမှာ ယမင်းဖြစ် သည်။လွမ်းရတိုင်းမောင့်အတွက် ရည်စူးပြီးဘုရားတွင်ပန်း လှူပြီး မောင်တစ်ယောက်သွားလေရာ ခလုတ်မထိစူးမငြိစေကြောင်းအခါ ခါဆုတောင်းမိသည်။ “ယမင်းရေ” “လာဟေ့ တင် တင်” “လွမ်းနေတာလား” “ဘာကိုလွမ်းရမှာလဲ” “ကောင်မ ငါမသိတာကျလို့” ယမင်းထိတ်လန့်သွားသည်။ ဘာတွေများတင် တင်သိနေသလဲဟူ၍ပင် “နင်လေ ဆရာလေးကိုချစ်နေတာ မဟုတ်လား” “ကိုယ်ကသာချစ်ရပေမယ့်သူက ကိုယ့်ကိုသတိတောင် ရပါ့မလား၊ မြို့သူအချောအလှတွေနဲ့ပျော်နေ မှာပါဟယ်” “အင်းလေ” “သူကချစ်တယ်ဆိုပါဦးတော့၊ဘကြီးအောင်မောင်းကရော ငါလိုမုဆိုးမ သမီးနှင့်သဘောတူနိုင်ပါ့မလား” “ဒီမှာယမင်း၊ဘကြီးအောင်မောင်း ကသူ့သားသာရွာသူတစ်ယောက် ယောက်နဲ့ ကြိုက်ပြီးသူ့သားရွာမှာအ ခြေချတာကိုလိုလားတယ်သိလား” “ရွာမှာလည်းပိုက်ဆံရှိအသိုင်းအ ဝိုင်းတွေပေါတယ်လေ” “အမ လေးသူ့သားသာတကယ်ချစ်လို့ကတော့ကြိုက်တဲ့သူနဲ့ပေးစား ချင်နေတာဟ” “ဟုတ်ရဲ့လားတင်တင်ရယ်၊မိဘဆိုတာသားသမီးကို ဆင်စီးလို့မြင်းရံ တာပဲမြင်ချင်ကြတာလေ”
“အေးနှော် အဲဒါလဲဟုတ်သားပဲ” တကယ်တမ်းမှာရင်မောရသူက ယမင်းပါ။ဘဝမှာမောင့်တစ်ယောက်တည်းချစ်မိပြီးမောင့်ကိုပဲတ သက်လုံးပြုစုစောင့်ရှောက်ချင် တယ်။မိမိကိုမချစ်လို့ပစ်ခွာသွား လည်းမိမိအပျိူစင်ဘဝကိုယူသွား တဲ့မောင့်ကိုအပြစ်မမြင် တဲ့အချစ်နဲ့ ဆက်ချစ်သွားမှာပါ “မောင်ရယ် ယမင်းအရမ်းလွမ်းရ တယ်ကွာ” ဒီလိုနဲ့သုံးလလောက်အထိမောင်က ရွာကို အဆက်အသွယ်မလုပ်ပဲ နေလာခဲ့တယ်။ဒါပေမယ့်လဲယမင်း ကတော့ဥပုတ်နေ့တိုင်းမောင့်ကိုရည် စူးပြီးဘုရားမှာပန်းလှူနေဆဲပါ။တနေ့တော့ “ယမာဒဒဒးရေ “ဘာလဲတင်တင်” “ငါရန်ကုန်ကိုခနသွားချင်တာ၊ငါ့ တို့ဒေါ်လေးနေမကောင်းလို့တဲ့လှမ်း ခေါ်တယ်၊ ငါတစ်ယောက်တည်းလဲ မသွားရဲဘူး၊နင်အဖော်လိုက်ခဲ့ပေး ပါလားဟယ်” ယမင်းလဲမောင့်ကိုတွေ့ချင်နေတာ နှင့် “ငါအမေ့ကို ပြောရဦးမယ်” “ငါလဲကူပြောပေးပါ့မယ်ယမင်း” တင်တင်အဒေါ်နေမကောင်းတာယ
မင်းအမေသိလို့ယမင်းအားတင် တင်နဲ့အတူ ရန်ကုန်ကိုလွှတ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်ကိုရောက်ပြီးတင်တင်အဒေါ် တက်နေတဲ့ဆေးရုံကိုရောက်ခဲ့တယ်။တင်တင့်အဒေါ်အတွက်ဆေး ယူနေ စဉ်မှာဂျူတီကုတ်နဲ့ဆရာဝန်နှစ် ယောက်အပြင်ထွက်သွားတာကိုသ တိထားမိတဲ့တင်တင်က “ယမင်းဟိုမှာဆရာလေး မဟုတ် လား” “ဘယ်မှာလဲ” “ဟိုမှာလေ၊ကားပါကင်ဘက်သွား နေတာ” ယမင်းလှမ်းကြည့်လိုက်တော့မောင် မှမောင်အစစ် ဖြစ်နေတယ် မောင်ကဆရာဝန်မလေးတစ်ယောက်လက်ကိုကိုင်ပြီးကားပါကင်ကို သွားနေတယ်။ပြီးတော့ကားတံခါး ကိုဖွင့်ပြီး မောင်းသူဘေးကထိုင်ကာ ဟိုဆရာဝန်မလေးကမောင်းသူ ဘက်ကထိုင်ကာမောင်းထွက်သွား တော့တယ်။
ရင်ထဲမှာမချိအောင်နာမိတယ်။မျက် ရည်တွေတလိမ့်လိမ့်ကျလာတော့ “ယမင်းစိတ်ထိန်းလေယမင်း” “ငါဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဟာ” “တောက်..လုပ်ရက်တာဟာ” “ထားလိုက်ပါတင်တင်ရယ်” “နင်ကသာထားလိုက်ပါ၊ငါရွာပြန် ရောက်ရင်ဘကြီးအောင်မောင်း ကို ပြောရမှာ” “ထားလိုက်ပါတင်တင်၊ငါ့ကိစ္စကို ငါရှင်းပါ့မယ်” “အေးပါသူငယ်ချင်းရယ်” ယမင်းကဆေးခန်းရှေ့ကစုံစမ်းရေး ကောင်တာကိုသွားပြီး “ညီမလေး ဒေါက်တာခန့်ထက် ကျော်ကဒီဆေးရုံမှာလုပ်တာလား” “ဘာဖြစ်လို့လဲမမ” “ခုနကတွေ့လိုက် လို့” “မမနဲ့ဘာတော်လို့လဲ” “မမကသူတို့ရွာကရပ်ဆွေရပ်မျိုး တွေပါညီမလေး” “အော် ဟုတ်လား မမ” “ခုနကသူနဲ့အတူပါသွား တဲ့ဒေါက် တာကရော” “သူတို့ကချစ်သူတွေလေမမ” “အော်” “မမက်မဘာကူညီရမလဲ” “ရပါတယ်ညီမလေး၊ကျေးဇူးပါ ညီမ လေး” ပိုသေချာသွားပြီ၊ယမင်းကိုချစ်တယ် ဆိုတဲ့မောင်ကယမင်းအပြင်နောက် တစ်ယောက်ထားနေတာပဲ နောက်တနေ့တော့ ယမင်းမောင့်ကို မပြောမဖြစ်ပြောမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီး မောင်ရှိရာကိုရှာလိုက်တယ်။
မောင့် ကိုမောင့်ကောင်မလေးနဲ့တွေ့တယ် “မောင်” “ဟင်ယမင်း” “ဘာ ဘာလာလုပ်တာလဲယမင်း” “မောင့်ကိုသတိရလို့လွမ်းလို့မောင့် ကိုလာတွေ့တာပါ” “ကိုကိုအဲဒါ ဘယ်သူလဲ” “ဒေါက်တာ မောင်ကအမရဲ့ချစ်သူ ပါ” “ယမင်း မင်းးမင်းးဘာတွေပြောနေ တာလဲ” “ယမင်းအမှန်အတိုင်းပြောတာ ပါ ဒေါက်တာ” “ယမင်း မင်းကွာ” မအော်စဖူးအော်ငေါက်နေတဲ့မောင့် ကိုကြည့်ကာယမင်းမျက်ရည်ဝဲလာ တယ်” “မောင် ယမင်းကိုမေ့နိုင်ပြီမဟုတ် လား၊မေ့လိုက်ပါမောင်၊ယမင်းက မောင်ချစ်ခဲ့တဲ့အညတရတောသူပါ မောင်ရယ်။မောင်တို့နဲ့ အဆင့်အတန်းတူတဲ့သူကိုရွေးချယ်တာမောင်မှန် ပါတယ်။မောင့်ကိုယမင်းမမုန်းရက် နိုင်ပါဘူးမောင်” ယမင်းပြောပြီးထွက်ခဲ့ တယ်။ဒါပေ မယ့်နောက်ကအသံတွေကိုကြားနေ ရဆဲပါ။
“ဒီမှာကိုကို ၊ကိုကိုဘာတွေရှုပ်ခဲ့တာ လဲ၊ရွှေဇင့်ကိုတမင်များအရှက်ခွဲ နေ တာလားကိုကို၊ဒါမျိုးတော့လာမကျောနဲ့ကိုကို၊ကိုကိုရွှေဇင့်ကိုရွေးမှာ လာ၊ဒါမှမဟုတ်အဲဒီတောသူကိုရွေး မှာလား၊ပြတ်ပြတ် သားသားလုပ်၊ အဲဒီတောသူကိုရွေးချင်ရင်လိုက် သွား၊ရွှေဇင့်အတွက်ယောက်ျားမရှားဘူး” “ရွှေဇင် ရွှေဇင်” ယမင်းနောက်က မောင်လိုက်မလာခဲ့ ပါ။ဒါပေမယ့်ယမင်းကျေနပ်ပါတယ်လေ။ယမင်းရွာပြန်ခဲ့တယ်။ မောင့်ကိုမုန်းမရတဲ့အပြင်ပိုလို့တောင်လွမ်းမိ တယ်။ဆရာဝန်မရှိတဲ့ဆေးရုံရွှေရောက်တိုင်းပေါ့။တနှစ်တောင် ကြာခဲ့ပြီလေ။အခုလဲမောင့်အတွက် မောင့်မွေးနေ့မှာရည်စူးပြီး ဘုရား မှာပန်းလှူပြီးပြန်ခဲ့တယ်။အမေက ရိပ်မိပြီးဘာမှမပြောတော့ပေ။ ညကိုးနာရီခန့်ရောက်တော့ “ဟေ့ခင်လှ ခင်လှ” ဘကြီးအောင်မောင်းကအမေ့နာ မည်ကိုခြံရှေ့ကခေါ်တယ် “လာပြီ၊လာပြီကိုကြီးအောင်မောင်း၊ဘာကိစ္စများအရေးတကြီးရှိလို့ည ကြီးမင်းကြီး” တံခါးဖွင့်ရင်းအမေကမေးတယ်
“အေးအရေးကြီးတယ်၊ဘယ်မှာလဲ နင့်သမီးယမင်းသူဇာ” “ရှင် ဘကြီးသမီး ရှိတယ်” “ခနလာခဲ့ဦးသမီး” “ဟုတ်ကဲ့ဘကြီး” ယမင်းသူဇာ ခြံဝဘက်ကိုထွက် လိုက်ပြီးဘကြီးကိုတွေ့တယ်။ “မခင်လှ” “ရှင် ကိုအောင်မောင်း” “ငါတစ်ခုပြောမယ်၊နင့်ကိုအားမနာ လို့မဟုတ်ဘူးနှော်” “ရှင်ဘာများဖြစ်လို့လဲကိုအောင် မောင်း” “ငါလူဆိုး ဖမ်းလာတယ်” “ဟင်ဘယ်မှာလဲလူဆိုး” အထိတ်တလန့်နဲ့မေးလိုက်တယ် “ဟေ့ကောင်လာခဲ့စမ်း” “ဟုတ်ကဲ့အဖေ” ဘကြီး နောက်ကအသံထွက်လာပြီး အိတ်တစ်လုံးနှင့်မောင့်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။မောင့်ပုံကညင်းသိုးသိုးပုံ ဖြစ်ပြီးဆံပင်များပင်ရှည်နေ တယ်။
“ဟင် မောင်” “မခင်လှဖြစ်သမျှအကြောင်းကို ငါနင့်ကိုတောင်းပန်ပါတယ်။နောက် မှလူကြီးစုံရာနှင့်လာတောင်းပန်ပါ့ မယ်” “ဟုတ်ဟုတ်” ဘာမှန်းမသိပဲအမေကတဟုတ်ဟုတ်ဖြစ်နေရှာတယ်။ “သမီးယမင်း၊ဒီကောင်အရက်သ မားဖြစ်နေပြီသိလား၊အ ရင်ကအ ကြောင်းတွေကိုခွင့်လွှတ်ပြီးငါ့သား ကိုပြုပြင်ပေးဖို့သမီးဆီငါအပ်တယ်၊ ဟေ့ကောင်သမီးကိုတောင်းပန်လိုက်” “ဟုတ်ကဲ့ပါအဖေ” “မခင်လှ ငါ့သားကိုဒီမှာပဲသိပ်လိုက် တော့မနက်ဖြန်ငါရွာကရပ်မိရပ်ဖ တွေကိုပြောပြီးမင်္ဂလာရက်မြန်းမယ်” “ရှင်” “အမလေးကိုအောင်မောင်း၊ဒီကိစ္စ ဆိုတာဟင်းရွက်ကန်စွန်းရွက်ဝယ် သလိုမျိူးမဟုတ်ဘူးနှော်၊သမီးသ ဘောထားကိုမေး ဦး” “ယမင်းသမီးသဘောထားက ဘယ်လိုလဲ” “သမီးမောင့်ကိုချစ်တယ်မေမေ” “အေးပြီးရော၊ရပြီကိုအောင်မောင်း၊ မနက်ဖြန်သာလူကြီးစုံရာနဲ့လာခဲ့ ကျမပြင်ဆင်ထားလိုက်ပါ့မယ်” “အေးကျေးဇူးပါမခင်လှ၊ငါစိတ်ချ လက်ချထားခဲ့ပြီ” ဦး အောင်မောင်းကထွက်သွားတော့ ခြံဝမှာသုံးယောက်သားကျန်ခဲ့တယ် “သမီး အိမ်ထဲဝင်” “ဟုတ်ကဲ့မေမေ” ယမင်းစိတ်မချစွာ မောင့်ကိုကြည့် နေတော့ “သားလဲလိုက်သွားလေ” “ဟုတ်ကဲ့အမေ” အိမ်ထဲရောက်တော့ “သားထမင်းစားပြီးပြီလား” “မစားရ သေးဘူးအမေ”
“သမီးနင်ယောက်ျားရပြီ၊နင့်ကိစ္စ နင်ရှင်းတော့ငါတော့အိပ်ပြီ” အမေ့ကိုယမင်းမျက်နှာပူမိတယ်။ အမေကလဲရိပ်မိပုံပေါ်ပါတယ်။ ဒါ ကြောင့်စောစောစီးစီးအိပ်ရာထဲဝင်သွားတော့တယ်။ “မောင်ရေချိုးလေ” “ဘယ်မှာချိုးရမလဲယမင်း” “ယမင်းပြမယ်” ယမင်း မောင်ရေချိုးမယ့်နေရာကို လိုက်ပြတော့ “ယမင်းမောင့်ကိုစိတ်မဆိုးဘူးလား” “မဆိုးပါဘူးမောင်ရယ်” “မောင့်ကိုခွင့်လွှတ်ပါ ယမင်း၊မောင် လေယမင်းအပေါ်သစ္စာရှိစွာနဲ့တ သက်လုံးရိုးမြေကျချစ်သွားပါ့မယ်” “ယမင်းယုံပါတယ်မောင်၊ရေအရင် ချိုးလိုက် နှော်မောင်၊မြန်မြန်ချိုးအ အေးမိမယ်၊ယမင်းမောင့်အတွက် တမင်းပွဲပြင်လိုက်မယ်” “ဟုတ်ကဲ့ပါယမင်း” မောင်ရေချိုးပြီးရင်စား ထမင်းပွဲ ပြင်လိုက်တယ်။မောင်ရေချိုးပြီး အဝတ်အစားလဲကာထမင်းစား တယ်။ထမင်းစားပြီးတော့ “အိပ်ကြမယ်ယမင်း” “ဟုတ်ကဲ့မောင်” ယမင်းအိပ်ခန်းထဲကိုပဲမောင့်ကိုခေါ် လိုက်တော့မောင်ကပြုံးပြီးတစ်ခါမှမပိတ်ဖူးသောယမင်းအိပ်ခန်းတံခါး ကို ပိတ်ပြီးမီးမှိတ်လိုက်တော့တယ်။ (ကျန်တဲ့အပိုင်းကိုယ့်ဟာကိုယ်တွေး)
Categorized as အငျးဆကျ Tagged ပိုငျရှငျဆီသို့